तिहारमा प्रयोग गरिने पाँच रङका टीकाको रहस्य – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
तिहारमा प्रयोग गरिने पाँच रङका टीकाको रहस्य
‘देऊ आशीरवाद ! भलो होस् !!’
काठमाडौं । आज गाई तिहार । काठमाडौंलगातका देशका विभिन्न सहरहरुमा र ठूलो ग्रामीण वस्तीमा गाई पूजा भइरहेको छ । बहुगुण भएको गाईलाई पूजा गर्ने चलन लामो समयदेखि चलिआएको हो । यसपछि गोरु पूजा र गोरु पूजापछि भाइटीका मनाउने परंपरा नेपाली जनताका माझमा यमपञ्चकका महत्वपूर्ण तीन दिनहरुमा पर्दछन् । नेवारी समाजमा म्हँ पूजाका रुपमा आफ्नो शरीरको पूजा गरिन्छ ।
आजदेखि पाँच रंगका रङहरु बढी प्रयोग गरिने र घरघरका भित्ताहरुमा बासुधाराका रुपमा हालिने गन्छि । तराइमा रङ्गोली मनाइन्छ । त्यहाँ विशेष खालको तिहार वा त्यौहार पनि मनाइन्छ । विविध रंगहरुको मानितो राखिने तिहारलाई रङपर्वका रुपमा पनि लिइन्छ ।
रातो रङ सूर्य रङ हो । यसमा रहेको ठानिएको प्रभावशाली शक्ति जसले बैरीहरुलाई निस्तेज पार्ने, दीनहीन बनाउने र मनोबल गिराउने कार्यमा मद्दत गर्दछ । त्यसै गरी सेतो रङलाई शैव रङका रुपमा लिइन्छ । यो भनेको शिवको मपर्ने रङ हो । यसले पनि परचक्रीहरुको मनोबल गिराउन र आफ्नो मनोबल उचो बनोउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
पहेंलोलाई पितृरङ भनिन्छ । यसले आफ्नो वंशज र वीरतापूर्ण परंपराको संकेत गर्दछ । आन्तरिक उत्साह भर्न आफ्ना कुलवंशहरुले शक्ति देऊन् भनी विश्वासका आधारमा यसलाई प्रयोग गन्छि । हरियो भनेको पृथ्वी हो । यो पृथ्वी रङ जीवनलाई जीवित गराई आफूलाई ताजा राखिराख्ने शक्तिका रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
नीलो रङ आकाशको रङ हो । यो आश्चर्य, असीम, चमत्कार र रहस्यका लागि प्रयोग गरिन्छ । वैरीसँग लड्दा मैले विजय प्राप्त गर्नेछु भनी परिकल्नाका साथ साहस बटुल्न यसले मद्दत गर्दछ ।